Akụkọ Reuben Yonatan na Martech Zone |
Edemede site na Reuben Yonatan
Reuben Yonatan bụ onye nchoputa na CEO nke GetVoIP, ihe ntụnyere VoIP nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịghọta ma họrọ ngwọta nkwurịta okwu azụmahịa maka mkpa ha kpọmkwem. Reuben na-enyere ndị SMB aka ịhazi atụmatụ azụmaahịa na omenala ma melite akụrụngwa ụlọ ọrụ n'ozuzu ya. Soro ya na Twitter @ReubenYonatan
Mgbe ị ka na-amalite azụmahịa, ọ na-anwa ịdọta ndị ahịa site n'ụzọ ọ bụla ị nwere ike, n'agbanyeghị ọnụ ahịa, oge, ma ọ bụ ike ọ gụnyere. Agbanyeghị, ka ị na-amụta ma na-etolite, ị ga-achọpụta na ịhazigharị ọnụ ahịa azụmaahịa nke ndị ahịa na ROI dị mkpa. Iji mee nke ahụ, ị ​​ga-achọ ịma ọnụ ahịa nnweta ndị ahịa gị (CAC). Otu esi agbakọ ọnụ ahịa nnweta ndị ahịa Iji gbakọọ CAC, naanị ị ga-ekewa ahịa niile na